२०७७ भित्र त्रिशूली–गल्छीको विद्युत् उत्पादन हुन्छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता २०७७ भित्र त्रिशूली–गल्छीको विद्युत् उत्पादन हुन्छ
अन्तरवार्ता, मुख्य खबर 706 views
गुरूप्रसाद न्यौपाने अध्यक्ष सिद्धकाली पावर लिमिटेड
त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् आयोजना (७५ मेवा), अपि पावर कम्पनी समूहले प्रवद्र्धन गरेर सिद्धकाली पावर लिमिटेड कम्पनीमार्फत अघि बढाएको परियोजना हो । यो परियोजना राजधानीबाट ५६ किलोमिटरको दूरीमा पृथ्वी राजमार्गमा रहेको छ । हिउँदमा समेत राम्रो बहाव भएको सप्तगण्डकीको एक प्रमुख सहायक नदी त्रिशूलीमा यो आयोजना निर्माण भइरहेको छ । यो जलविद्युत् परियोजनासँगै पर्यटन तथा उद्योगको समेत विकासको सम्भावना रहेको छ । प्रस्तुत छ, आयोजना विकासको वर्तमान अवस्थाको सेरोफेरोमा रहेर आयोजना विकासकर्ता सिद्धकाली पावर लिमिटेडका अध्यक्ष गुरूप्रसाद न्यौपानेसँग आर्थिक अभियानकर्मी दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानी :
त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् परियोजनाको वर्तमान अवस्था के हो ?
त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चाहिने जग्गा खरीद भइसकेको छ । परियोजनालाई चाहिने आवास, गोदाम, प्रयोगशालालगायत गरी ६–७ ओटा घर तथा गोदामघरहरू बनिसकेका छन् । गिट्टी कुट्ने क्रसर प्लाण्ट जडान भएको छ । परियोजनासम्म जाने बाटो तयार भएको छ । ११ केभी क्षमताको बिजुलीको लाइन तान्ने काम भएको छ । अहिले बालुवा गिट्टी सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । हामीसँग भएको जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने टीम र उपकरणमध्ये केही काबेली बी १ जलविद्युत् परियोजना (२५ मेगावाट) र इवाखोला परियोजना (१० मेगावाट)को निर्माणमा काम गरिरहेका छन् भने आधीचाहिँ दार्चुलामा अपर नौगाड गाड (८ मेवा)मा काम गरिरहेका छन् । उक्त परियोजनाहरू सकेपछि त्यही समूह र उपकरण त्रिशूली गल्छी परियोजना निर्माणमा आउनेछन् र निर्माणको काम तीव्रगतिमा अघि बढ्नेछ ।
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको विषय कहाँ पुगेको छ ?
हाम्रो अनुमान यो परियोजनाको कुल निर्माणको लागत रू. १४ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ हो । त्यसमध्ये रू. ९ अर्ब ८३ करोड बैङ्कको ऋण र रू. ४ अर्ब २४ करोडचाहिँ स्वपूँजी (ईक्वीटी) लगाउने गरी यो आयोजनाको डिजाइन गरेका थियौं । अपि पावर लिमिटेडले यसको बहुमत शेयरमा लगानी गरेर आफ्नो सहायक कम्पनीका रूपमा अघि बढाउने गरी यो आयोजनामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । सिद्धकाली पावर कम्पनीमा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने उद्देश्यले अपिले धितोपत्र बोर्डमा १ः२ को दरमा हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएको लामो समय भइसकेको छ ।
यही बीचमा नेपाल सरकारले सोलारका परियोजना निर्माणको काम पनि निजीक्षेत्रलाई दिने नीति बनाई खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा दिने गरी टेण्डर प्रकाशित ग¥यो । अपि पावर कम्पनी समूहले पनि यस प्रक्रियामा भाग लिई १८ मेवा क्षमताका विभिन्न सोलार आयोजना निर्माणको काम पनि परेको छ । सोलारका आयोजनाहरू निर्माणका लागि करीब रू. १ अर्ब ८० करोडको लगानी लाग्ने अनुमान छ । त्रिशूली गल्छीको वित्तीय समायोजन गर्दा एउटा आधार अपि पावरको हकप्रद शेयरबाट १ अर्ब रुपैयाँ, बैङ्कबाट ९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने बन्दोबस्त भइसकेपछि हामीले बैङ्कसँग यस परियोजनामा ऋण लगानीको सम्झौता गर्‍यौं ।
बैङ्कले नियुक्त गरेका टेक्निकल ड्यू डेलिजेन्स कन्सल्ट्याण्ट विशेषज्ञहरूले टनेल ठूलो हुने प्रतिवेदन दिए । जसले गर्दा ठूलै प्रकारका जोखिम पनि हुनसक्ने साथै यसका लागि तय गरिएको रू. १४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँले लगानी नपुगेर करीब १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भन्ने प्रतिवेदनले देखायो । बैङ्कले यो परियोजनामा लगानी गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । त्यसपछि हामी टनेलको जोखीमबाट बच्ने र लगानी पनि कम लाग्ने मोडलमा आयोजनाको टनेल हटाई क्षमता घटाएर जाने हो कि भन्ने बारेमा पनि अध्ययन गरिरहेका छौं ।
जेनेरेशन लाइसेन्स र विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भइसकेपछि टनेलको जोखीम रहेको पत्ता लागेको हो ?
शुरूमा भारतका कन्सल्ट्याण्ट राखेर अध्ययन गर्दा यो आयोजना ८ किलोमिटर टनेल र ७५ मेवा क्षमताको हुनसक्ने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आयो । त्यसको सर्वेक्षण साथै विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) पनि गरियो । त्यसपछि यसको टेक्निकल ड्यूडेलिजेन्स स्टडी बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)ले गर्‍यो । त्यसक्रममा विशेषज्ञहरूले स्थलगत भ्रमण गर्दा टनेलमा बढी लगानी लाग्नेछ भन्ने प्रतिवेदन आयो । यति गर्दासम्म हामीले शेयरधनीहरूबाट उठाएको पैसाबाट जग्गा किन्ने, विभिन्न आधारशिलाहरू निर्माण गर्ने, कन्सल्ट्याण्ट नियुक्त गरी अध्ययन गर्ने जस्ता कामहरू गरी परियोजना निर्माणका लागि तयार भइसकेका थियौं । जसले गर्दा पछि हट्ने अवस्था थिएन । त्यसैले ड्यामको मुनि नै विद्युत्गृह राखी विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी परिवर्तित अवस्थामा क्षमता घटाएरै भए पनि यो परियोजना निर्माण गरौं भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
तपाईंको सम्बन्धमा टनेलको समस्याले क्षमता घटाउनु परेको प्रमुख कारण भन्नुभयो । तर, तपाईंलाई स्वीकृत भइसकेको जेनेरेशन लाइसेन्स र पीपीएमा क्षमता घटाउने काम भयो भने यसले नजिर स्थापना गरी भोलि विभिन्न बहाना बनाउँदै क्षमता घटाई माग्नेको सङ्ख्या नबढ्ला र ?
आयोजना जबसम्म बन्दैन तबसम्म अध्ययन र अनुसन्धान चलिरहने विषय हो । यसमा तलमाथि भइरहन सक्तछ । हामी कतिपय सन्दर्भमा क्षमता बढाउन आवेदन लिएर गएका पनि छौं । अब अहिले घटाइदेऊ भनेर माग्नु परेको छ । बढाउन मिल्छ भने घटाउन पनि त मिल्नु पर्‍यो नि ?
बैङ्कको प्रतिक्रियापछि अन्य विकल्पको खोजी गर्नु भएन ?
बैङ्कहरूको पनि आफ्नै बाध्यता छ । विगत केही समयदेखि बैङ्किङ प्रणालीमा वित्तीय सङ्कट चलिरहेको छ । बैङ्कमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएका कारण २–३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ठूलो पूँजी जुटाउन कठिन छ । नसकेपछि विदेशी लगानी जुटाउन सकिन्छ कि भनेर ऊर्जासम्बन्धी लगानी केन्द्रित विभिन्न सम्मेलनहरूमार्फत पनि बुझ्ने काम गरिरहेका छौं ।
यसैक्रममा नेपालमा इनर्जी डेभलपमेण्ट काउन्सिल (ईडीसी)ले गएको माघको १३–१५ सम्म काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपाल पावर इन्भेष्टमेण्ट समिट २०१८ मा म पनि सहभागी भएको थिएँ । १० वर्षमा ४० हजार मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय साधनको व्यवस्था गर्ने मूल ध्येयका साथ नेपालमा पहिलोपटक उक्त सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलनमा आएका विदेशी लगानीकर्ताहरू के कस्तो अवस्थाका परियोजनालाई के कसरी लगानी गर्ने रहेछन् बुझ्ने मौका थियो त्यो । उनीहरू नेपालमा निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनाहरूको निर्माणको लागि इञ्जिनीयरिङ प्रोक्योरमेण्ट कन्ष्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) मोडेलमा काम गर्ने प्रस्ताव लिएर आएका रहेछन् ।
त्यहाँ चीनको विदेशी लगानीसम्बन्धी बीमा गर्ने सिनो स्योर् कम्पनी र सिभिल निर्माण कम्पनी चाइना साउथ इण्डष्ट्रिज ग्रूप कर्पोरेशनका तर्फबाट विशेषज्ञहरूले ईपीसीएफसम्बन्धी कार्य मोडेल प्रस्तुति गरेका थिए । यसअनुसार निर्माण शुरू गर्न तयार भएका नेपाली कम्पनीहरूले २० प्रतिशत लगानी गरेमा ८० प्रतिशतसम्म चिनियाँ लगानी आउने प्रावधान छ । यो लगानीबाट सिभिल संरचनाको निर्माण, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण ल्याउने र जडान गर्ने तथा विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्य गर्न विभिन्न कम्पनीहरू तत्पर छन् । विद्युत् उत्पादन शुरू भएको १ वर्षभित्र यस मोडेलबाट भएको चिनियाँ लगानी फिर्ता भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । यही विधिबाट अहिले अफ्रिकामा ठूलो परिमाणमा चिनियाँ लगानीबाट आधारशिलासम्बन्धी आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् ।
यस मोडेलमा काम गर्ने गरी सिद्धकाली पावर लिमिटेड कम्पनीले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–गल्छी जलविद्युत् आयोजना (७५ मेवा)को लागि ८० प्रतिशत चिनियाँ लगानी परिचालन गर्ने काम अघि बढेको छ । यसरी हुने विदेशी लगानीसम्बन्धी कामको संयोजन आईडीएस इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडले गरिरहेको छ । यस बाटोबाट अब नेपालमा धेरै ओटा जलविद्युत् परियोजनाहरू निर्माणका लागि वित्तीय समायोजन हुनेछ भन्ने विश्वास बढेको छ । नेपालमा केन्द्र सरकार तथा स्थानीय सरकारले परिकल्पना गरेका जलविद्युत् तथा अन्य आधारशिलाका परियोजनाहरूमा यस प्रकारको लगानी जुटाई धेरै ठूला कामहरू हुनेछन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ ।
यो मोडेल निजी लगानीबाट बन्ने आयोजनाहरूका लागि उपयुक्त छ । नेपाली लगानीकर्ताका तर्फबाट जुटाउनु पर्ने २० प्रतिशतका लागि भने संस्थापक तथा सर्वसाधारणहरूबाट शेयर निष्कासन विधिबाट रकम सङ्कलन गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । आयोजना बनिसकेपछि यसको निर्माणमा रहेको जोखीम कम हुने हुँदा स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पुनर्कर्जा लिएर यी आयोजनाहरू निर्माणका लागि लिएको ऋण चुक्ता गर्न सकिने हुँदा हामीहरू यस मार्गमा काम गरिरहेका छौं । हाम्रो योजना भनेको त्रिशूली–गल्छी आयोजनालाई बहुआयामिक बनाउने भन्ने रहेको छ ।
यो कसरी बहुआयामिक परियोजना बन्नेछ ?
गल्छीको बहुपक्षीय विकासको भविष्य देखेरै उक्त क्षेत्रमा आयोजना विकास गर्ने स्थानको खोजीमा अनेकौं पटक यात्रा गरेर यो ठाउँ फेला पारेको हो । यस ठाउँमा सोलार परियोजना पनि लगाउन सकिन्छ । ड्यामले रोक्ने बर्खाको बालुवा व्यवस्थापन गरी काठमाडौंको माग पूर्ति गर्न सकिन्छ ।
यो परियोजना सँगसँगै पोखरीको चारैतिर स्वदेशी÷विदेशी पर्यटकलाई राख्ने अन्तरराष्ट्रिय स्तरको रिसोर्ट बनाउन सकिन्छ । पहाडमा पश्चिमी संस्कृतिअनुसारको रिसोर्ट बनाउने योजना छ । यसले काठमाडौंबाट चीन, पोखरा वा चितवन जतासुकै जाने मानिसहरूका लागि पनि एकरात त्यहाँ बसेर भोलिपल्ट आफ्नो गन्तव्यमा लाग्ने वातावरण निर्माण गर्ने सोच छ । यहाँ उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत्को उपयोग गरी पुराना कागज, फलाम तथा सिसालाई रिसाइक्लिङ गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने विचार छ । जहाँ रिसाइकल भएर तयार सामग्री काठमाडौं, पोखरा वा चितवन जतासुकै ढुवानी गर्न सजिलो पनि हुन्छ । अझ मेरो सोच त त्यहीँ पत्रिका छाप्ने प्रेस राखेर कुन क्षेत्रमा कति पत्रिका पठाउने हो त्यहीँबाट निश्चित परिमाणमा छुट्याएर पठाउने गर्न पाए छिटो पनि हुन्थ्यो भन्ने छ । यी उद्योगहरूमा सिद्धकाली पावर लिमिटेडका शेयरधनीहरूको स्वतः लगानी हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
आयोजनाको संरचना विकास कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
यस परियोजनामा २५/२५ मेवा क्षमताका ३ ओटा टर्वाइन रहनेछन् । नदीमा पानीको बहाव पूरा भएको बेला ७५ मेवा र नभएको बेला कम विद्युत् निकाल्छौं । अर्कोचाहिँ आयोजनाबाट करीब १ सय ५० मिटर माथि डाँडामा २० मेवाको पिकिङ पोखरी बनाएर राति पानी जम्मा गर्ने र पीक आवरमा त्यो पानी प्रयोग गरी पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउने योजना छ ।
आयोजना विकासकर्ताको दृष्टिले हेर्दा निकै फाइदायुक्त ठाउँमा हुनुहुन्छ, होइन ?
त्रिशूली नदी वारपार गर्ने पुल नभएकोमा सरकारले त्यहाँ नयाँ पुल बनाइसकेको छ । निर्माणका लागि आवश्यक विद्युत् र उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्ने लाइन तथा सडकसमेत पहिल्यै छन् । प्रसारण लाइन, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सहयोगमा बन्ने सबस्टेशनमा जोडिन सकिने सम्भावना बनेको छ, जुन ड्यामबाट मात्र १ किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ । त्यति मात्र होइन, यो तिब्बत जाने बाटोका साथै सरकारले परिकल्पना गरेको स्याटेलाइट सिटी गल्छी पनि नजीकै पर्दछ । त्यसैगरी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन अन्तर्गतको नेपालको ट्रान्समिसनको मुटु काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट शुरू भएर नागार्जुनको पछाडि ल्याण्डफिल साइट हुँदै गल्छी जान्छ । गल्छीबाटै एउटा लाइन चीन र अर्को लाइन भारत जान्छ । उक्त लाइनको हब गल्छी हो । यसर्थ यहाँ बन्ने जलविद्युत् परियोजना धेरै महत्त्वको हुनेछ ।
यस आयोजनाका लगानीकर्तालाई चाहिँ के कस्ता फाइदा छन् नि ?
यो आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि उत्पादन हुने बिजुली राष्ट्रिय ग्रीडमा आपूर्ति गरेपछि प्राप्त हुने आयबाट कम्पनीका शेयरधनीहरूलाई नगद लाभांश उपलब्ध गराइनेछ । यो आयोजनाको शेयरमा लगानी गर्न स्थानीय जनता तथा सर्वसाधारणहरूमा शेयर निष्कासन गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण हुनेछ र यसबाट शेयरधनीहरूलाई तरलताको सुविधा उपलब्ध हुनेछ । दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने तथा सोबाट लाभ प्राप्त गर्न केही समय लाग्ने हुँदा शेयरधनीहरूले केही समय प्रतीक्षा गर्नु पर्दछ ।
प्राधिकरणलाई विद्युत् विक्री गर्न थालिसकेपछि उक्त आयोजनाको शेयर धितोपत्र बजारमा लिष्टिङ गर्छौं । त्यसपछि यसमा लगानी गर्ने शेयरधनीहरूले शेयर सजिलै किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ । जति बैङ्क ऋण तिर्छौं, त्यति नै बराबर बोनस शेयर दिन्छौं र जति नगद जम्मा हुन्छ, त्यसबाट नगद लाभांश प्राप्त हुनेछ ।
अब कसरी अघि बढ्ने सोच्नुभएको छ ?
हामीले पाएको जेनेरेशन लाइसेन्स ७५ मेगावाटको छ । त्यसमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी दुवैलाई समावेश गर्ने गरी अघि बढ्ने नीति लिएका छौं । नेपाल सरकारबाट हामीले पाएको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र अनुसार २०७७ जेठ १ गते त्रिशूली गल्छीबाट बिजुली निकाली सक्नुपर्छ । धेरै भए ६ महीना ढिलो/छिटो होला, नत्र निर्धारित मितिमै बिजुली निकाल्छौं ।
The due diligence study was carried out by Hydro-Consult Engineering Limited, not by Butwal Power Company Limited.
९ बैशाख २०७५, आईतवार १८:०८
साढे १३ अर्बको ट्रेजरी बिल विक्री गर्दै राष्ट्र बैङ्क, सोमवार बोलकबोल
९ बैशाख २०७५, आईतवार १६:१६
५० अङ्कले बढेको नेप्से १४३८.४९ विन्दुमा, २१ कम्पनीको शेयर ९ देखि १० प्रतिशतले बढ्यो
९ बैशाख २०७५, आईतवार १५:५८